नेपाल आज | प्रहरीका पूर्व डीआईजी भन्छन् दरबार हत्याकाण्डको रहस्य प्रहरीले पत्ता लगाउन सक्छ
प्रहरीका पूर्व डीआईजी भन्छन् दरबार हत्याकाण्डको रहस्य प्रहरीले पत्ता लगाउन सक्छ
बिहिबार, २६ असोज २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (TK)
नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिन्छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, अपराध महाशाखाको नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा उनले रानीबारी हत्याकाण्ड, न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याकाण्डलगायत थुपै्र गम्भीर र जटिल किसिमका अपराधको अनुसन्धान गरेका थिए ।
१० महिनाअघि प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएर नागरिक जीवन बिताइरहेका तिनै पूर्वप्रहरी अधिकारी मल्लसँग नेपालले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति, प्रवृत्ति र क्षमताबारे लामो कुराकानी गरे, त्यसैको सम्पादित अंश :
अनुसन्धान भनेको मानिसमा जन्मैदेखि आएको हुने रहेछ । अहिले पनि अनुसन्धान भन्नासाथै केही प्रहरी अधिकृतहरूको मात्र नाम आउँछ । ७२ हजार जनाको फौज भएको प्रहरीमा अनुसन्धान अधिकारीको नाम लिनुपर्दा १० र १५ जना मात्रै छन् । अनुसन्धान खुबी तालिम दिएर भन्दा पनि जन्मजात गुण हो । यस्तो क्षमतालाई थोरै बाटो देखाइदिए त्यसमा निखार आउने रहेछ ।
प्रहरीको जागिर भनेको कस्तो भने पोसाक लगाएपछि रवाफ देखाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । तर, बिनाबर्दी निरन्तर खटिएर गरिने अनुसन्धानले यस्तो रवाफ पाउँदैन । नयाँ भर्ना हुनेहरूले बर्दी लगाएर आफू ठूलो भएको महसुस गर्न र गराउन चाहन्छन् । अनि, कहाँ उनीहरू यस्तो अनुसन्धान गर्ने काममा मन लगाउँछन् त रु केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, अपराध महाशाखामा त एकरएक वर्षमै अधिकारीहरू आउनेरजाने भइरहन्छ । उनीहरू अडिँदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने टिम कसरी तयार गर्न सकिन्छ ? अनुसन्धानप्रति विकर्षण हो यो ?
हो । तर, त्यो धैर्य कसलाई छ र रु तुरुन्तै परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति छ । अनुसन्धान त धेरै समय लाग्छ । निरन्तर खटिरहनुपर्छ । जबकि, फास्टफुडको जमाना छ अहिले
भनेपछि त हामी अनुसन्धानमा निकै नै कमजोर रहेछौँ, होइन रु
साँच्चै भन्नुपर्दा कमजोर नै छौँ । प्रहरीका केही युनिटहरूले गरेका काम राम्रा पनि छन् । जस्तै स् सीआईबी, अपराध महाशाखा, लागूऔषध ब्युरो, विशेष ब्युरो आदि । तर, यी मात्रै त प्रहरी युनिट होइनन् । ७५ जिल्लामै मुद्दा चलाउने युनिटहरू छन् । समग्रमा, अनुसन्धान कमजोर छ ।
प्रहरी सेलिब्रिटी बन्ने चलनले पनि बिगारिरहेको छ । हुन त समाजमा सेलिब्रिटी बन्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा मात्रै छैन । अहिले मन्त्रीहरू नै सेलिब्रिटी भइरहेका छन् । काठमाडौँको दरबार मार्गमा मन्त्री आफैँ पुगेर पसल सिल गरे । धनगढीमा मन्त्री आफैँ टाँचा लगाउँदै हिँडे । सञ्चारमन्त्री टेलिफोनको तार काट्न तैनाथ भए । मन्त्रीहरूले नै यस्तो काम गर्दै हिँडेपछि कर्मचारीले के गर्ने रु भोलिदेखि गृहमन्त्री खानतलासी, छापा मार्न हिँड्न थाले भने प्रहरीले चाहिँ के गर्ने रु
अनुसन्धान गर्ने निकाय मिडियाबाजीमा लागेपछि मूल कामबाट टाढा हुनु स्वाभाविक हो ।
आइहाल्छ नि उदाहरणका लागि सञ्जय साह टकलाको घटना लिन सकिन्छ । धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूले दबाब दिएका थिए । नाम नभनौँ । दबाब दिने, भन्ने उनीहरूको काम हो, अनुसन्धान गर्ने हाम्रो कर्तव्य । त्यसैले हामी रोकिएनौँ र उनी अहिले जेलमा छन् ।
लागूऔषधमा हुँदा ठूलो प्रलोभन आएको थियो । अपराध महाशाखामा बस्दा पनि आयो । कसले, कुन केसमा भनेर नभनौँ । आउँछ, प्रलोभनमा पर्नेरनपर्ने
तपाईंको इच्छा ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई अन्य सरकारी निकायको पनि सहयोग चाहिन्छ । के उनीहरूको व्यवहार सहयोगी हुने गरेको छ रु
अबचाहिँ गाह्रो छ । किनभने, अहिलेको इन्टेलिजेन्स भनेको ‘कमोडिटी’ वस्तु हो । कमोडिटी नकिनी पाइन्छ रु विकसित देशहरूले सूचना खरिद गर्न थालेका छन् । हामी त्यो स्तरमा कहिले पुग्ने, थाहा छैन । पैसा नभई कसैले पनि सूचना दिँदैन, अहिलेको जमानामा ।
रियलमै नासाका वैज्ञानिक बनेका लुजेन्द्रले गरे कमाल (अन्तर्वार्तासहित)
आइतबार, १६ मङि्सर २०७५
पोलमा फोटो टाँसेर प्रधानमन्त्रीको भलो हुनेवाला छैन (भिडियोसहित)
ओशो तपोवनलाई तह लगाउने हाकिम भन्छन्, ‘अख्तियारको त्रास देखाउन खोजियो’(भिडियोसहित)
शनिबार, ०१ मङि्सर २०७५